Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Lown–Ganong–Levine syndrome (LGL) နှလုံးခုန်မြန်တဲ့ ရောဂါဆန်း
Lown–Ganong–Levine syndrome (LGL) နှလုံးခုန်မြန်တဲ့ ရောဂါဆန်း
Wed, Sep 7, 2011 at 2:18 AM
I have the palpitation of heart. So I take the medicine (Catenol 50mg) Atenolol every day since 1990. I have the premature ejaculation. So I want to take Viagra medicine. Can I take this medicine? I have little blood pressure 130/90 also. I want to know about of palpitation of heart. One of the doctors told me this name is Lown–Ganong–Levine syndrome. Please reply for me.
ဒီရောဂါက နာမည်ကလဲ ဆန်းတယ်၊ ဖြစ်တာလဲ ရှားတယ်။ ပညာပေးရေးဘို့ရာ ဆေးဝေါဟာရတွေကလဲ ခေါင်းရှုတ်စေနိုင်တယ်။ ဆေးပညာ သင်ကြားသူတွေတောင်မှ အထူးကုလိုင်း မဟုတ်ရင် စိတ်မပါကြဘူး။ ရောဂါကို စတွေ့ကြတဲ့ ဆရာဝန် သုံးဦးနာမည်ကို ရောဂါနာမည်တပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗမာတွေ နားပိုယဉ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်လိုလဲ မဟုတ်ဘူး။ တီဘီ ကာကွယ်ဆေးလို BCG လို့ အတိုကောက် နာမည်ပေးသလိုပါဘဲ။ အရှည်ကို (ကျွန်တော်လို) ဆရာဝန် အတော်များများ မှတ်မထားချင်ကြဘူး။
လူ့နှလုံးမှာ လျှပ်စစ်ဓါတ်ဖြစ်ပေါ် စီးလျှောက်မှု အမြဲရှိတယ်။ SA node နဲ့ AV node ဆိုတဲ့ နေရာလေး နှစ်ခုကနေ နှလုံးခုန်တာ မှန်နေအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနေကြတယ်။ သူတို့ကနေဆက်ပြီး Bundle of His ဆိုတာနဲ့ တွဲအလုပ် လုပ်ကြတာ ဖြစ်တယ်။ AV node က အခရာကျတယ်။ LGL syndrome ရောဂါရှိနေသူဟာ ဒီလျှပ်စီးလမ်းကြောင်းမှာ အပိုအဆာပါနေသူလို့ ယူဆတယ်။ Accessory pathway ကနေ Bundle of His ကို တိုက်ရိုက်ဆက်နေပုံရတယ်။ WPW syndrome ဆိုတာလဲ ရှိသေးပြန်တယ်။ မတူကြဘူး။
LGL syndrome ရှိနေတာကို EKG (ECG) စစ်တာနဲ့သာ စောစောသိနိုင်တယ်။ PR interval ဆိုတာက 0.12 second သာရှိမယ်။ ဒါမှမဟုတ် ဒိထက်နည်းမယ်။ QRS complex duration ကတော့ ပုံမှန်သာဖြစ်တယ်။
ရောဂါလက္ခဏာက ရှင်းတော့ ရှင်းရှင်းလေးပါ။ Tachycardia နှလုံးခုန်တာ မြန်နေမယ်။ တခြားမမှန်တာ ရှာမရဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ရောဂါလို့တောင် သတ်မှတ်ဘို့ မကောင်းဘူးဆိုလာကြတယ်။ တခုခုမဖြစ်ခင် အခြေအနေတရပ်သာ ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ကြတယ်။ ရောဂါနာမယ်က Outdated clinical diagnosis ခေတ်နောက်ကျနေပြီ ပြောလို့ရတယ်။
Paroxysms of tachycardia ဆိုတဲ့ ဆေးအသုံးအနှုန်းဆိုတာ နှလုံးခုန်ုမြန်တာ ရုတ်တရက် ထဖြစ်လာတာကို ဆိုလိုတယ်။ ကိန်းဂဏန်းတွေ ထောက်ပြဘို့ နည်းလှသေးတယ်။ သိထားသလောက် မိန်းမတွေက ပိုအဖြစ်များတယ်။ လူနာ ၃၄ ယောက်ထဲက ၇ဝ့၈% ရှိတယ်။ အသက်ပိုင်းပြောရရင် ၃၃့၅% နှစ် အဖြစ်များတယ်။
Paroxysms ရုတ်တရက် ဖြစ်တာထဲမှာ Palpitations ရင်တုံမယ်၊ Lightheadedness ခေါင်းထဲမှာ ပေါ့သွားသလိုနေမယ်၊ Shortness of breath အသက်ရှူမဝသလိုနေမယ်။ အခံနှလုံးရောဂါ ဥပမာ Structural heart disease တည်ဆောင်မှု ဆိုင်ရာ နှလုံးရောဂါ၊ ဒါမှမဟုတ် Coronary artery disease နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ တခုခုရှိနေသူဆိုရင် ဆက် ဖြစ်လာတာတွေ ရှိမယ်။ ဆိုပါစို့ Chest pain ရင်ပတ်နေရာ နာမယ်၊ Hypotension သွေးဖိအားကျမယ်၊ Ventricular tachycardia or Ventricular fibrillation ဖြစ်သူဆိုရင် Syncope အရုပ်ကျိုးပြတ်ဖြစ်သွားမယ်။
• Causes ဘာလို့ဖြစ်သလဲ မသိပါ။ မိသားစုထဲ တယောက်မက ဖြစ်နိုင်တယ်။
• သုံးတဲ့ ဆေးတွေကတော့ Beta-blockers, Calcium channel blockers, Digoxin တွေ ဖြစ်တယ်။
• ရှားရှားပါးပါး ဆေးနဲ့မရသူတွေကို Surgical Care ခွဲစိတ်တာလဲ လုပ်တယ်။ Pacemaker implantation (ပေ့စ်မိတ်ကာ) ထည့်ပေးတယ်။ AV node ဒါမှမဟုတ် Bundle of His ကို Radiofrequency (RF) ablation ဆိုတာ ဆက်လုပ်ပေးမယ်။
• Diet အစားအငောက် ဘာမှ ထူးပြီး ရှောင်စရာမလိုပါ။
• အနေအထိုင် အလုပ်အကိုင်တော့ ဆင်ခြင်ရမယ်။ ကားမောင်းတာမျိုး ဆင်ခြင်ရမယ်။
• Prognosis ပိုဆိုးတယ်၊ ပိုကောင်းစေတယ်၊ သေဆုံးနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ လေ့လာမှု စာရင်းဇယား မပြည့်စုံပါ။
Viagra in Heart Disease ကို သပ်သပ် ရေးပါမယ်။